Torolàlana Ubuntu hanao ny dingana farany | Ubunlog
Ianao ve mieritreritra ny hanao ny dingana any Ubuntu ary tsy fantatra hoe aiza no hanombohana? Ho hitanao eto ny iray Fanombohana torolàlana mankany Ubuntutu mba hahafahanao mazava tsara ny dingana voalohany tokony hataonao raha te hametraka ny fizarana azy amin'ny solosainao ianao.
Manantena izahay fa izany Mazava ho azy Ubuntu esory ny fisalasalanao rehetra ary raha mbola manana ianao dia aza misalasala mijanona amin'ny anay fizarana fampianarana izay hahitanao torolàlana ho an'ny karazana teknika (ary tsy dia teknika) amin'ny Ubuntu.
Inona no ho hitanao amin'ity torolàlana Ubuntu ity? Indrindra, hanana ny fidirana amin'ny atiny izay hanome ianao valiny amin'ireo fanontaniana mahazatra indrindra mipoitra izany rehefa manapa-kevitra ny hiala amin'ny Windows ianao na amin'ny rafitra hafa ary te-hametraka Ubuntu ho solony.
Fanesorana ny fisalasalana momba an'i Ubuntu
Mifanaraka amin'ny Ubuntu ve ny solosainako?
Inona ireo tsiro Ubuntu? Iza no hisafidy?
Sintomy ary apetraho Ubuntu
Ahoana ny fomba hisintonana ny Ubuntu
Ahoana ny fandoroana CD na USB misy bootable amin'ny installer Ubuntu
Ahoana ny fametrahana ny Ubuntu
Mianara mametraka Ubuntu amin'ny dingana vitsivitsy
Fifandraisana voalohany amin'i Ubuntu
Manomboka amin'ny Ubuntu, manomboka aiza aho?
Ny efijery fidirana
Inona no atao hoe Dash ary inona no ilana azy?
Mpitantana varavarankely vs birao
Ahoana ny fametrahana programa amin'ny Ubuntu
Ahoana ny fametrahana lohahevitra hita amin'ny Ubuntu
Lohahevitra 3 hita maso hanamboarana Ubuntu
Conky, widget iray hanehoana ny loharanon'ny PC-nao
Lisitry ny tahiry ho an'ny Ubuntu
Ahoana ny fomba hamafana ny tahiry PPA
Terminal sy ny baiko ifotony
Ovay ny endrik'ilay terminal ho lasa retro.
Ahoana ny fomba fametrahana am-paosy fonosana
Fikojakojana ny rafitra
Ahoana ny fandotoana ny kapila mafy ataonao